Vatema mumisasa yeNazi - Serge Bilé - Afrikhepri Fondation
Muvhuro, Gumiguru 18, 2021
Vatema muNazi Camps - Serge Bilé
On aisaziva zvese nezve Hondo Yenyika II. Iri bhuku rinoburitsa pachena zvisingazivikanwe zvachose zvemutambo uyu zvisina kunyorwa nevanyori venhoroondo kana kunyange nevairarama: Kuendeswa kwevatema kumisasa yevasungwa nemisasa yekuparadza yeHitler Germany. VaAfrica, maIndia ekuMadokero, maAmerican, vakabatwawo munyonganyonga, vakasungwa uye kudzingwa kazhinji nekuda kwekutora chikamu kwavo mukurwa kana kuramba kufamba.
Vakaiswa muchinzvimbo chemhuka, nekuti vaive vatema, ava varume nevakadzi vaive, mumisasa iyi, vachinyadziswa, senge nyika iyi yeEquatorial Guinea, Carlos Greykey, uyo akavezwa kuMauthausen akapfeka hembe. weYugoslav Royal Guard kushanda semukomana. Chipupuriro chinokatyamadza, chakaunganidzwa kuGerman, France (muimbi ane mukurumbira John William), Spain, Belgium, Norway, Martinique, Ivory Coast, Surinam, Senegal neUnited States, kubva ku vapenyu kana vamwe vavo mune nhamo. Isu tanga tichiziva here kuti iyo yakakurumbira Nuremberg Mitemo, inodzvinyirira vasiri maAryan kubva ku1935, haina kunanga maJuda chete asi yainetsekawo nevatema vaigara kuGerman panguva iyoyo?
Aya maAfro-maGerman, akamanikidzwa kumanikidzwa, vaivewo vamwe vevanhu vekutanga vakadzingwa vakatumirwa naHitler kumisasa yevasungwa nguva yehondo isati yatanga. Iri bhuku rinodzidza zvakare kuti idzi misasa yevasungwa yeGerman yakanga isiri basa revaNazi. Dzokutanga dzakavakwa muna 1904 muNamibia kubvisa vanhu vechiHerero vaipikisa kukoloniwa nemauto aChancellor Bismarck. Mapeji mazhinji asina kunyorwa enhoroondo kwatinoona, pamusoro pezvitsauko, masimba emaoko, panguva yehondo, yeavo vaizove vatungamiriri vakuru vevatema chikonzero: Nelson Mandela, Martin Luther King, Léopold Sédar Senghor naAimé Césaire.
Nyika maererano neMonsanto
Kusarudzwa kwemabhuku evechidiki veKamite
Mwana weZambia anova Microsoft akasimbiswa nyanzvi pa15